I-China Cantilever Form Traveler mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
I-Cantilever Form Traveler sesona sixhobo siphambili kulwakhiwo lwecantilever, olunokwahlulwa lube luhlobo lwe-truss, uhlobo oluhlala intambo, uhlobo lwentsimbi kunye nohlobo oluxubileyo ngokwesakhiwo. Ngokweemfuno zenkqubo yokwakha ikhonkrithi yecantilever kunye nemizobo yoyilo yeFom Traveler, thelekisa iintlobo ezahlukeneyo zeempawu zeFom yokuHamba, ubunzima, uhlobo lwesinyithi, itekhnoloji yokwakha njlnjl. Imigaqo yoyilo lweCradle: ubunzima bokukhanya, isakhiwo esilula, esomeleleyo nesizinzileyo, esilula indibano kunye nokudibanisa ukuya phambili, ukusetyenziswa kwakhona okunamandla, amandla emva kweempawu zokumila, kunye nendawo eninzi phantsi kweFom Traveler, imisebenzi emikhulu yokwakha ephezulu, efanelekileyo kwimisebenzi yokwakha ifomwork yentsimbi.
I-Cantilever Form Traveler sesona sixhobo siphambili kulwakhiwo lwecantilever, olunokwahlulwa lube luhlobo lwe-truss, uhlobo oluhlala intambo, uhlobo lwentsimbi kunye nohlobo oluxubileyo ngokwesakhiwo. Ngokweemfuno zenkqubo yokwakha ikhonkrithi yecantilever kunye nemizobo yoyilo yeFom Traveler, thelekisa iintlobo ezahlukeneyo zeempawu zeFom yokuHamba, ubunzima, uhlobo lwesinyithi, itekhnoloji yokwakha njlnjl. Imigaqo yoyilo lweCradle: ubunzima bokukhanya, isakhiwo esilula, esomeleleyo nesizinzileyo, esilula indibano kunye nokudibanisa ukuya phambili, ukusetyenziswa kwakhona okunamandla, amandla emva kweempawu zokumila, kunye nendawo eninzi phantsi koMhambi weFom, imisebenzi emikhulu yokwakha ephezulu, efanelekileyo kwimisebenzi yokwakha formwork yentsimbi.
Uyilo lweLianggong lweFomu kunye nokwenziwa kweemveliso zabaHambi beFom, ezibandakanya ubukhulu becala ezantsi kweyona truss iphambili, inkqubo yenkxaso ethweleyo, inkqubo yokuhamba kunye neyokumisa, inkqubo yokurhoxisa, inkqubo kunye neefreyimu.
Ulwakhiwo lweLianggong kulwakhiwo lwedayimani lweFom yokuhamba kweemveliso eziphambili, iimveliso zayo kwizizukulwana ezithathu zophuhliso olutsha: Uhlobo lwe-bolt yohlobo lweFom Traveler, ve NGU-2 uhlobo lwesixokelelwano sohlobo lohambo lomhambi; NGU-3 uhlobo lokudibanisa iplagi-uhlobo lokuhamba ngesanti kubunzulu baphantsi ulwakhiwo.
Umhambi weFomu unokwenziwa ngokwezifiso ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi kwaye uyilelwe ukuthobela iikhowudi zamanye amazwe. Izixhobo zizazisa ngokwazo kunye nenketho yokumiliselwa ngasemva kokudilizwa.
Uyilo loMthwalo woMhambi weCantilever
(1) Into yokulayisha
Ngokwendlela ebunjiweyo yoyilo lwebhulorho kunye neenkcukacha zokwakha ezikhutshwe nguMphathiswa Wezothutho, umthwalo olinganayo zezi zilandelayo:
Umlinganiso omninzi wokugcwala kwemowudi yokwandiswa kunye nezinye izinto xa ibhokisi ye-girder ikhonkrithi ithululwa: 1.05;
Amandla omlingani onamandla wokuphalaza ikhonkrithi: 1.2
Impembelelo yefom yokuhamba kwabahambi ngaphandle komthwalo: 1.3;
Uzinzo lomlingani wokuchasana nokubhukuqa xa ugalela ikhonkrithi kunye neFom Traveler: 2.0;
Umba wokhuseleko ekusebenziseni okuqhelekileyo koMhambi weFom ngu-1.2.
(2) Layisha kwi-truss ephambili yoMhambi weFom
Umthwalo weBhokisi ye-girder: Umthwalo webhokisi we-girder ukuthatha elona nani likhulu kakhulu lokubala, ubunzima beetoni ezingama-411.3.
Izixhobo zokwakha kunye nomthwalo wabantu abaninzi: 2.5kPa;
Umthwalo obangelwe kukulahla kunye nokushukuma kwekhonkrithi: 4kpa;
(3) Umdibaniso womthwalo
Umdibaniso womthwalo wokuqina kunye nokujonga amandla: Ubunzima beKhonkrithi + ubunzima bomhambi + izixhobo zokwakha + umthwalo wesihlwele + amandla okushukuma xa ibhaskithi ihamba: ubunzima boMhambi oFomayo + umthwalo wempembelelo (0.3 * ubunzima boMhambi weFom) + umthwalo womoya
Jonga imigaqo-nkqubo yobuchwephesha kulwakhiwo lweebhlorho zohola wendlela kunye nezibonelelo zecalverts:
(1) Ukulawulwa kobunzima boMhambi weFomu kuphakathi kwama-0.3 nama-0.5 amaxesha obunzima bekhonkrithi bokugalela ikhonkrithi.
(2) Ubuninzi besiphene esivumelekile (kubandakanya isixa sokujika kwesilingi): 20mm
(3) Inqaku lokhuseleko lokuchithwa kwezinto ngexesha lokwakha okanye lokuhamba: 2.5
(4) Inqaku lokhuseleko lwenkqubo yakho ene-anchled: 2
Intshayelelo kulwakhiwo olupheleleyo loMhambi weFom
Iimveliso zabahambi zeFom eziyilelwe nguLianggong formwork, izinto eziphambili zezi:
Inkqubo ephambili yeTruss
Inkqubo ephambili ye-truss ibandakanya:
Umtya ongasentla, isiseko esingezantsi, intonga yangaphambi kwe-oblique yentonga yangemva ye-oblique, intonga ethe nkqo, ucango lomnyango njl.
Ukunikela inkqubo esezantsi yokuxhasa
Inkqubo yesibhengezo esisezantsi ikakhulu ineenkqubo ezisezantsi, umqadi wenkxaso wangaphambili, umqadi wenkxaso yangemva, iihanger oist njl.
Inkqubo kunye nenkqubo yenkxaso
Inkqubo kunye nenkqubo yenkxaso zezona zinto ziphambili kumhambi weFomu
Inkqubo yokuvalwa kunye neankile
Inkqubo yokuhamba kunye neyokumilisela ikakhulu iquka
I-ankile yangasemva, ivili leBuckle elungelelanisiweyo, umkhondo wokuhamba, umqamelo wentsimbi, isinamathiselo sokuhamba njl.
Inkqubo yokunyusa ukumiswa
Umzekelo weprojekthi yenkqubo yokuphakamisa ukumiswa
Unxibelelwano lweendawo zokuxhoma eziphezulu nezisezantsi.
Egqithileyo Itonamenti yendlela
Okulandelayo: Umsele weBhokisi
Baza, ekwenziweni eziphathekayo
Umsebenzi weKhonkrithi weFomu